Khin Maung Chin: August 2011
30 August 2011 12:00 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်း...) စာဖတ်လာသူတွေအနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားရင်ခွင့်လွှတ်စေချင်တယ်ဗျာ..။ (လေးစားလျက်)
» » » ဆက်ချင်သေးရင်နှိပ်လိုက်ပါမိတ်ဆွေ » » »
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ကဗျာ 13 ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
27 August 2011 3:10 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ဟာသ 12 ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
23 August 2011 7:10 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
တာမို့ခုလိုမေးလာတဲ့သူရှိလာတဲ့အခါနားလည်ထားမိသလောက်ပြန်ဖြေလိုက်ရတယ်လို့ပဲပြောပါရစေ..။ Blocked ကို Unblock ပြန်လုပ်နည်းပါ။သိပြီးသားသူတွေဆော်ရီးပါနော်...။မသိသေးတဲ့သူတွေကိုရည်ရွယ်ထားတာမို့ပါဗျာ..။
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ နည်းပညာဆိုင်ရာများ2ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
2:13 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဒီနေ့မနက်စောစောမြတ်မင်းနဲ့ထွေးငယ်ဈေးဝယ်ဖို့ထွက်လာကြတာပေါ့။ မနေ့ကအတန်းထဲမှာဖြေခဲ့တဲ့ အစမ်းစာမေးပွဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကြိတ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိအောင်အလောင်းအစားလေးတစ်ခုလုပ် ထားခဲ့တယ်လေ..။အမှတ်နည်းတဲ့သူကထမင်းဟင်းတစ်ရက်စာချက်ကျွေးကြေးပဲပေါ့...။ဒါနဲ့ကတိအတိုင်း
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ဇာတ်လမ်းတို5ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
21 August 2011 12:46 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
“ အရပ်ရှစ်မျက်နှာမှာရှိကြကုန်သောမိဘပြည်သူများခင်ဗျား။ (ကျွီ အီ ဟီဟီ..ကျွီ... ဤကားလော်စပီကာ နာစေးချောင်းဆိုးသဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာသောအသံပေတည်း....စကားချပ်) အဟမ်း အဟမ်း... လော်စပီကာကချောင်းဆိုးတာနဲ့ကြေငြာသူလည်းယောင်သွားတယ်ထင်ပါ့ဗျာ..။သူကပါလိုက်ပြီး
လည်ချောင်းရှင်းလိုက်ရသေးတယ်လေ..။ အဟမ်းချစ်ရပါသောရွာသူရွာသားများအားလုံး နေထိပန်းလိုမညှိုးနွမ်းပဲမိုးဆန်းပန်းလိုလန်းဆန်းပါစေလို့ကျွန်တော်များမိဘမေတ္တာ TV အိမ်မှဆုတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား...” ကျွီ..ဟီ အီ..............အီ..။
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ဇာတ်လမ်းတို7ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
18 August 2011 1:41 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ကြေငြာချက်9ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
13 August 2011 3:46 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ရေးမိရေးရာလေးပါ9ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
11 August 2011 6:07 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဖြစ်လာနေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာသာချိုတယ်၊ငံတယ်၊ခါးတယ်မခွဲခြားပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှောက်လှမ်းသွားကြရမှာပါ။အဲဒီလိုအရသာအမျိုးမျိုးကိုမြည်းစမ်းနိုင်ဖို့လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြရမှာပါ။ ပြင်ဆင်ထားကြရမယ်ဆိုလို့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး..။ လူအချင်းချင်းထားအပ်တဲ့ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေ၊အပြန်အလှန်လေးစားအပ်တဲ့
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ရေးမိရေးရာလေးပါ7ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
08 August 2011 5:34 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ခုရက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးမေမေရှိခဲ့စဉ်က မေမေ့အိမ်လေးမှာမောင်နှမတွေအားလုံးနဲ့တူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့ဖူးတာတွေ၊တစ်ဦးကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာနဲ့လေးလေးစားစား ဆက်ဆံခဲ့ကြတာတွေကိုသတိတွေရနေလို့ပါ။ပိုပြီးသတိရလာစရာဖြစ်လာတာကတော့သူငယ်ချင်း
(Norwaygian)တစ်ယောက်နဲ့အတူ သူငယ်ငယ်ကနေခဲ့တဲ့သူ့မိဘအိမ်ကို (ငယ်ငယ်ကနေခဲ့တဲ့အိမ်ဆိုလို့သူ့ကိုကြီးနေပြီလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဦး..
လူကြီးမင်းကခုမှအသက်နှစ်ဆယ်တောင်မပြည့်သေးပါဘူးခင်ဗျာ...လပိုင်းလိုပါသေးတယ်.. ဒါပေမယ့်မိဘတွေနဲ့တူတူမနေပဲသီးသန့်အိမ်ခွဲနေပါတယ်ခင်ဗျာ။) အလည်လိုက်သွားမိလို့ပါ။
07 August 2011 2:39 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
အပြင်လူထုရဲ့နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတဲ့အခက်အခဲတွေ၊တွေ့ကြုံကျော်လွှားနေရတဲ့အန္တရာယ်တွေ၊ စိတ်ပျက်စရာကောင်းစဖွယ်ဖန်တီးပြောင်းလဲပစ်လိုက်တဲ့ပညာရေးအခြေအနေတွေ၊ ရယ်မောချင်စရာကောင်းလှတဲ့SYSTEMတွေ၊(ရယ်တယ်ဆိုတာပျော်လို့မဟုတ်ပါ)၊စသည့်..စသည့် ပေါင်းများစွာကိုလှလှပပလေးသရုပ်ဖော်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။တချို့ကပြောချင်ပြောကြမယ်။
နိုင်ငံခြားရောက်သွားလို့ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုအထင်သေးသွားတယ်ဆိုပြီး...။ကျနော်ကြိုပြောလိုက်ပါတယ်။ အထင်မသေးပါ။ဘယ်တော့မှလည်းကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုအထင်ပြန်သေးမယ့်စိတ်ထားမျိုးမွေးမှာမဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုကိုယ်အထင်အမြင်သေးသွားကြတဲ့တချို့သူများကိုလည်းဘာဝေဖန်ချက်မှပေးမည်မဟုတ်ပါ။ လူတိုင်းကိုယ့်ဆန္ဒအတိုင်းနေခွင့်ရှိကြပါတယ်။အဲဒီအချက်ကိုလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝလေးစားမိပါတယ်။ သို့သော်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုတော့လက်ခံပါတယ်။စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရမှာလည်းဗျာ?ထားပါတော့လေ..။ပြောနေတာများသွားရင်လည်း လိုရင်းရောက်မှာမဟုတ်လို့ခုပဲရပ်နားလိုက်ပါပြီဗျာ။လေးစားစွာနဲ့ပဲတိုက်တွန်းချင်တာကNEGATIVE WAYနဲ့မကြည့်ကြပဲPOSSITIVWAY နဲ့ကြည့်ပေးကြပါလို့...။။။။ (ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့်....ချင်းကလေး)
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံလေးတွေပါ5ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
04 August 2011 6:25 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဒီနေ့တော့ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ဘာရေးရကောင်းမလဲဆိုပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာဟိုဟိုသည်သည်လျှောက်သွားရင်းမှ စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ ခဏနေတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အိမ်နားကအသိလင်မယားအကြောင်းလေးက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ခေါင်းထဲ၊အတွေးထဲဝင်လာတာနဲ့ နည်းနည်းပါးပါးပြန်စီပြီး ခုလိုဇာတ်လမ်းတိုလေးတစ်ပုဒ်ရေးလိုက်မိပါတယ်။(ငယ်ငယ်တုန်းကအဖြစ်အပျက်လေးပါ) ကျနော်ရေးလိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတိုလေးဟာ စာဖတ်သူတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့များတိုက်ဆိုင်သွားခဲ့ပါက ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြပါ။ အမှန်မှာတော့ခုလိုတိုက်ဆိုင်တာမျိုးလည်းဖြစ်လာချင်မှဖြစ်လာမှာပါပဲ။သို့သော် ကိုယ်က(ဘယ်သူ့ကိုမှစော်ကားဝေဖန်လိုစိတ်မရှိပါပဲ) အပျော်သက်သက်ရေးလိုက်မိသောစာက တစ်ပါးသူကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားမှာကိုမလိုလားတာမို့ ကြိုတင်ပြီးတောင်းပန်ထားလိုက်တာပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံးကိုခင်မင်လေးစားလျက်ပါ။
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ဇာတ်လမ်းတို 8 ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
02 August 2011 5:23 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ပင်လယ်ထဲမထွက်ခင်နေပူပူကုန်းမြေပေါ်မှာလမ်းသလားနေတဲ့သူကို ကဗျာဆရာမြင့်ဦးဦးမြင့်က ကဗျာစာအုပ်လေးတစ်အုပ်လက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ စာအုပ်ရဲ့နာမည်က ''ပင်လယ်ကိုလရောင်နဲ့မျှားရတယ်တဲ့'' ..။ တွေ့ဖူသမျှကဗျာစာအုပ်တွေထဲမှာတော့အတော့်ကိုအဆင်အပြင်ကောင်းမွန်တဲ့ စာအုပ်ပါ။ ပင်လယ်ကိုချစ်တတ်အောင်သင်နေသူ 'သူ့' အတွက်ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ပေါ့။ မျှားတဲ့အလုပ်ကိုမကြိုက်ပေမယ့် 'မျှား' တဲ့စာတွေကိုသူကြိုက်သည်။ အပြင်လောကဇာတ်ခုံမှာတော့ 'မျှား' ခြင်းတွေသံသရာလည်နေသည်။ 'မျှား' ခြင်းဆိုသည်မှာ ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝဖို့ တစ်ပါးသူအားဖြားယောင်းသွေးဆောင်သိမ်းသွင်းသည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရမလားမသိ။
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ဇာတ်လမ်းတို9ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
01 August 2011 1:04 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်မရေးချင်ပါဘူး။ ဘာလို့မရေးချင်တာလည်းဆိုရင်အင်မတန်ဇီဇာကြောင်တယ်လို့ အထင်ခံရမှာရယ်၊ဘဝမှာတခါမှခုလိုလူသိရှင်ကြားကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်မပြောပြဖူးတာရယ်ကြောင့်ပါပဲ။ (ဘယ်ပြောပြဖူးမလဲ...မင်းသားတို့၊အဆိုတော်တို့မှမဟုတ်တာနော်..ဟဲဟဲ). ပြီးတော့တဂ်ပို့စ်ရေးခိုင်းတဲ့သူမရှိဖူးခဲ့လို့ ရေးလက်မရှိတာရယ်လည်းပါတာပေါ့။ (ဘယ်သူရေးခိုင်မှာတုန်း၊စာတစ်ကြောင်းတောင်ဖြောင့်အောင်တော်တော်ရေးတတ်တာကိုး) ဒီလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးရမယ်လေ..မဟုတ်ဘူးလား? ခုမှဘကုန်းရွာထဲရောက်တာနှစ်ရက်တစ်ပိုင်းရှိသေးတာဆိုတော့ လူသိလည်းမများသေးပါဘူး။ (လူတွေသိဖို့ဆိုတာကလည်းဟားဟားဟားအဆင့်ပါပဲလေ..ဟားဟား)
ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေကို ဒီ့ထက်ပိုရင်းနှီးစေလိုပြီးတဂ်ပေးလိုက်တဲ့ မမအိန်ဂျယ်လ်ရဲ့စေတနာကြောင့် ရေးဖြစ်သွားရတဲ့ဒီတဂ်ပို့စ်လေးကို ဖတ်မိကြတဲ့မောင်နှမတွေအားလုံး ကျနော်ရေးထားတာတွေထဲမှာမသင့်တော်တာတွေများပါလာခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့ ရှေ့မျက်နှာမော်နီတာရှေ့ထားပြီးကြိုတင်တောင်းပန်ထားပါတယ်ဗျာ..။ (စိတ်သိပ်မချရဘူး:P)
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ရေးမိရေးရာလေးပါ 13 ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်